Ndị na-emepụta igwe ihe na-emepụta Thermoplastic | China Thermoplastic Road akara Machine Factory & Suppliers
—— Thermoplastic Road Marking Ngwaọrụ——
Igwe na-egosi okporo ụzọ maka thermoplastic na Extruder
Anyị bụ ndị China kasị ọkachamara ọkachamara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụzọ marking igwe maka thermoplastic na extruder. Ọ bụ ngwa na multifunctional akụrụngwa, ọ nwere a elu nke akpaaka, elu nchekwa ọnụọgụ, ọ nwere ike inyere belata oru osisi ike, melite arụmọrụ nke ewu.
LXD860 Aka Push Thermoplastic Road Marking Machine
Anyị bụ ndị China kasị ọkachamara ọkachamara emeputa aka push thermoplastic ụzọ marking igwe. Igwe ihe omimi nke uzo thermoplastic bu akụrụngwa eji eme ihe eji eme ihe n 'intrammoplasticroadmarking, o kwesiri ka ya na thermoplastic preheater rụọ ọrụ.
Anyị bụ ndị China kasị ọkachamara ọkachamara emeputa onwe-propelled thermoplastic ụzọ marking igwe. Akpụkpọ ụkwụ akara nke akụrụngwa a bụ nke nkenke nkenke dị elu, nke nwere ike ime ka usoro ahụ dị n'usoro, ịdị edo edo ma mara mma. Enwere ike iji mma ejiri akara akara mee ihe n'okporo ụzọ dị iche iche.
LXD168 Na-akwọ ụgbọala Typedị Na-arụ Ọrụ Ngwaọrụ Thermoplastic (convex)
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke na-akwọ ụgbọala ụdị multi-ọtọ thermoplastic (convex) ụzọ marking igwe. Ọ bụ ngwa na multifunctional akụrụngwa, ọ nwere a elu nke akpaaka, elu nchekwa ọnụọgụ, ọ nwere ike inyere belata oru osisi ike, melite arụmọrụ nke ewu.
LXD-618 vingkwọ ụgbọala Thedị Thermoplastic (convex) Machine Nkọwapụta okporo ụzọ
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke na-akwọ ụgbọala ụdị thermoplastic (convex) ụzọ marking igwe. Ọ bụ ngwa na multifunctional akụrụngwa, ọ nwere a elu nke akpaaka, elu nchekwa ọnụọgụ, ọ nwere ike inyere belata oru osisi ike, melite arụmọrụ nke ewu.
LXD860 Gbaa ịnyịnya On Type Thermoplastic Road akara Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa nke nọkwasi-on ụdị thermoplastic ụzọ marking igwe. Agba agba nwere okpukpu abụọ nke igwe anaghị agba nchara, nke nwere ike ịmị ọkụ ma kpughee ọkụ, ọ nwere ike inye aka chekwaa ike ma zere ịkpụ ọkụ. Igwe ahụ nwere uru dị elu, arụmọrụ dị elu, dị mfe ịrụ ọrụ, ma dị mfe maka mmezi.